Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo si rasmi ah u qiray inay jirto habacsanaan dhinaca amniga ah (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo si rasmi ah u qiray inay jirto habacsanaan dhinaca amniga ah (DHAGEYSO)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa qiray inay magaalada Muqdisho ka jirto habacsanaan dhinaca amniga ah, isagoona taasi ku tilmaamay inay ugu wacan tahay wada-shaqeyn la’aanta ka dhaxeeysa laamaha amniga iyo guddoomiyaasha degmoooyinka gobolka Banaadir.
Yuusuf Madaale ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidanka ee heer gobol, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in laga wada-shaqeeyo nabad-gelyada, si looga hortago weerarada ay Al-shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho.
Wuxuu sidoo kale Yuusuf Madaale ku hanjabay in guddoomiyihii si daacadnimo ah howshiisa u gudan waayo, in xilka laga qaadi doonno, islamarkaana la keeni doono mid shaqada si wanaagsan u guta.
Yuusuf Madaale ayaa dhinaca kale sheegay inay waajib tahay in xiriir uu dhex maro mas’uuliyiinta degmooyinka deriska ah, islamarkaana ay is weydaarsadaan xogaha, waxaana uu intaas ku daray hadii wada shaqeynta ay joogto noqoto ay meesha ka bixi doonto habacsanaanta amni darro.
“Waxaa jirta habacsanaan dhinaca amniga ah, waxaana taasi ugu wacan in wada-shaqeyn la’aanta ka dhex jirto gudoomiyaasha degmooyinka Muqdisho iyo laamaha ammaanka, marka ciddii howshooda si rasmi ah u gudan weyso xilka ayaa laga qaadayaa, waxaana lagu badalayaa qof si fiican howsha u gudata” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Madaale.
Dhinaca kale, Bashaar Bashiir Geedi oo ah taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Banaadir oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa qiray inay aad u yar tahay wada-shaqeynta ay la leeyihiin qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga dalka, isagoona dhinaca kale xusay inaan arrintaasi marnaba loo dul qaadan doonin, islamarkaana ciddii waajibkooda si daacadnimo ah uga soo bixi weyso talaabo adag laga qaadi doonno.
Si kastaba ha ahaatee, hadaladaan hanjabaadaha ah ee kasoo yeeray labadaasi mas’uul ayaa imaanaya xilli Xarakada Al-shabaab ay dhawaantaan weerar ismiidaamin ah oo aad u xoogan ay ku qaadeen agagaarka madaxtooyadda Soomaaliya ee Hoteelkii SYL, iyadoona weerarkaasi uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.